Dhageyso: Maxay tahay sababta loo beegsanayo xaasaska Saraakiisha Al Shabaab? – idalenews.com
Kismaayo(INO)- Afhayeenka Hay’adda Nabad Suggida Jubbaland, Axmed Maxamed Maxamuud (Axmed Carab), ayaa ka hadlay sababta ay u beegsanayaan xaasaska Ururka Al Shabaab, ee ku sugan Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Afhayeenka oo wareysi siiyay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa marka hore ku waramaya inaysan jirin wax naxariis ah oo kala dhaxeysa Ururka Al Shabaab, maadaama ay maalin kasta dilayaan muwaadiniin Somaliyeed.
Axmed Carab, ayaa yiri “Shabaab nimanka la dhaho waxaan isu hayno oo naxariis ah majirto. Dadka ay qalayaan waa xaasaskeyna, dadka ay dilayaan waa wiilasheenii, habeen iyo maalin dadka Somaliyeed ayay laayaan, kuwa Hoteelada Muqdisho ay ku qarxinayaan waa muwaadiniin Somaliyeed.”
“Waxaan kuu sheegayaa qaniinyaba qaniinyaa kaa fuliso ayay Soomaali ku maah maahdaa. Nimankan ayaga ah nooc walba oo aan ula dagaalami karno waan ula dagaaleynaa.”
“Xaasaskooda caqiidiyan waxay aaminsan yihiin nimankooda waxay aaminsan yihiin. Amni darrada ugu koowaad naagaha ayaa sababa, waxayna ku sababaan inay sahmiyaan meelo qaarkood oo miino lagu aasaayo, dadka qaarkood ama Odayaasha Dhaqanka, Salaadiinta ama qofka siyaasiga oo aan wadan ilaalo, meelna fadhiya waxa sahanka bixiyo waa xaasaska. Marka dadka la madax jebiyana waxa bistooladaha ku wareejiyaan waa xaasaska, ragga magaalada ayay dhex galaan. Waxa bistooladaha ku qariya xijaabka dumar waaye.”
“Waxaan kuu sheegaynaa naagaha Shabaab amni darrada ugu ballaaran ayagaa u sabab ah, meel walba ay jooggaan ayagaa sabab u ah, mana wada joogeyno.”
“Naag ninkeeda inuu na soo weeraro ugu maqan yahay, ayadana ay nagu dhex jirto, marka ay na aragtana sanka naga qabsaneyso, ma ogolaan doono, mana yeeli doono.
Dawlada Kenya oo iska fogeysay eedo loo soo jeediyay oo sheegaya inay qasab kuceliso qaxootiga